Sawirro: Madaxweyne farmaajo oo cadaado uga qeyb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha galmudug Sawirro: Madaxweyne farmaajo oo cadaado uga qeyb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha galmudug – Somnews
You are at:Home»WARARKA»Sawirro: Madaxweyne farmaajo oo cadaado uga qeyb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha galmudug
Sawirro: Madaxweyne farmaajo oo cadaado uga qeyb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha galmudug
By somnews on	 May 29, 2017 WARARKA
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomalia mudane maxamad c/llahi farmaajo iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminaayo ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada cadaado ee xarunta KMG maamulka galmudug.
Madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa waxaa garoonk diyaaraddaha cadaado si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha galmududug mudane axmad ducaalle geelle xaaf,madaxweyne ku xigeenka galmudug,guddoonka baarlamaanka wasiiro iyo xildhibaano.
Madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu magaalada cadaado uga qeyb galay Xafladda Caleema saarka Madaxwaynaha G/Mudug.
Sidoo kale munaasabadda caleema saarka waxaa ka qeyb galay Madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle,wakiilka qaramada midoobay iyo wakiilka midowga afrika iyo masuuliyiin kale.
Madaxweyne farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay xafladda caleema saarka ayaa waxa uu si qota dheer uga hadlay arimaha dib u heshiisiinta maamulada galmudug iyo ahlu-sunna iyo sida ay dowladda uga go’antahay in dib u heshiisiin ay labada dhinac ka dhex abuurto.
“Markii aan rabnay inaan heshiisiino Galmudug iyo Ahlusuna, intii aanan bilaabin labada dhinac inaan heshiisiino ayaa Guddoomiyihii iyo Gudoomiye ku xigeenkii Baarlamanka Galmudug dhaheen intaan labada dhinac la heshisiin marka hore anaga hanala heshiiisiiyo, markaan heshiisiiinay ayaa wakhtiga nagu yaraaday, in aan u gudubno hadana dib u heshiisiinta Ahlu suna iyo Galmudug, Marka Madaxda halkan fadhida ha iska ilaaliyaan khilaafka dhexdooda ah, ayuu yiri madaxwayne Farmaajo.
Sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay la shaqeyn doonto maamulka cusub ee galmudug iyo dhamaan maamul goboleed-yada dalka ka jira.
Dhinaca kale waxaa munaasabadda caleema saarka khudbaddo ka jeediyay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna dyuqa muqdisho mudane taabit cabdi maxamad iyo madaxweynayaasha maamulada ,puntland,jubbaland,koonfur galbeed iyo madaxweyne ku xigeenka hirshabeelle.